Guddoomiye Sanyare,”Islaanta seexan wayday aniga farxad bay iitahay wiilkeeduna wuxuu marayaa wadadii Gujis”.
July 21, 2021 Xuseen 6
Puntlandtimes (Galkacyo)-Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Mudane Cabdiladiif Muuse Nuur Yare oo ka hadlayey munaasabadda ciidda ee magaalada Galkacyo ayaa ka hadlay dagaalka ay dowladdu kula jirto malayshiyaadka Alshabaab.
Guddoomiye Sanyare ayaa sheegay in Puntland ay dagaal culus la gashay Alshabaab isla markaana ay hadda ku raad joogaan haraadigoodii oo uu sheegay inay sida ugu dhaqsaha badan maxkamad u soo taagi doonaan sida uu hadalka u dhigay.
Mar uu ka hadlay cabashada ka imaanaysa qaar kamid ah beelaha Koonfurta Soomaaliya ee u doodaya ragga qirtay Alshabaabnimada ayuu sheegay inay tahay wax laga xumaado in rag cuqaal sheeganaya ay u doodayaan dad qirtay laynta wax garadkii Puntland iyo kamid ahaanshaha Alshabaab.
“Islaanbaa maalin dhoweyd isoo wacdayoo waxay itiri 4 beri ma seexan markii wiilkeeda la xiray, Islaantaasi waxay la seexan wayday ma taqaan?, aniga farxad bay iitahay waayo waxay ogtahay wiilkeedu inuu xiran yahay Silsiladihii Gujis iyo Jeeri lagana yaabee inuu caska aado,” Sidaasi waxaa yiri guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur Yare.
Ugu dambayntiina guddoomiyaha ayaa ugu baaqay shacabka deegaamada Puntland gaar ahaan gobolka Mudug inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka Puntland si gacanta loogu soo dhigo qofkasta oo u soo shaqo tegey cabsi gelinta iyo dilka hal-doorkooda.
mohamed sulab says:
Abdiladif muuse nuur yare Gudomiyaha Gobalka Mudug ee puntland,sida xayiga & nolasha leh ee uu hadalkisu ucadyahay masha Alaa in hadal cad oo dhiran weye noloow Gesiga birta ah,wali mahayo masul somali ah oo sida Abdiladif guleyso.
Hooyada seexanweyday waa beer wax dhalay oo layaab maleh laakiin ha ogaato in horteed hooyooyin badan la seexanwaayeen murugo iyo ciil markii argagaxiso wiilkeeda oo kale ah ay madaxa ka toogteen wiilashoodii amase isku qarxiyeen. Mase ogtahay in guddoomiye Sanyare isku mar waayey aabbihiis, walaalkiis, iyo wiil uu adeer u yahay oo hal qarax lagu wada dilay? Waxay ahayd mid ka mid ah musiibooyinkii ugu xumaa ee ee ku habsada qoys Soomaali ah ilaa 1991.
Odayaasha Xamar kasoo qaylinaya haddii ay damiir leeyihiin oo dadkooda ka naxayaan waxay iska qaban lahaayeen argagaxisada ay yaqaannaan ee ku dhex jirta ee dadkooda tarabtarabta ugu laynaysa Muqdisho. Waxaa layaab leh haddii beel kale hal qof ka disho dhulka ayaa gariiraya haddiise aragagixisadu 100 ka disho — waa lax dhakani abaar moog. Reer Muqdisho waxaa damiirkoodii iyo dadnimadoodii dhimatay maalinkii qaraxii Zoobe lagu dilay kun qof laakiin aysan tallaabo qaadin, dersina ka baran. Waxaa ka dhintay dareenkii damqashada. In xukuumad ku-sheegga la eedeeyo macne sameynmayso.
Puntland waxay ka fakeraysaa nolosha dadkeeda iyo xasilloonida dalkeeda, ciiddii dool ugu timaadda si ay u waxyeelaysana way u caddaalad-falaysaa laakiin jixinjix iyo naxariis u muujinmayso — come what may.
Reer Mudug aad baan ugu hambalyeynayaa. Argagixisada oo dhan ha’iska celiyaan. Qabiilkuu doono hakasoo jeedee, kay qabtaan ee qirta ama ayku cadaato qoorta ha’u dheereeyaan. Aadbaan anigu taas u taageersanahay. Waayo waa cudur kugu dhex nool oo kugu fidaya ood adna iska eeganeyso. Laakiinse aad wax ka qaban kareyso. Iska daweeya cudurkaas aad inta badan iska daawaneyseen.
Dadweynuhuna waa iney la shaqeeyaan Dawladooda. Hadii kale dedaal walba oo ay geshaa waxey ku danbeyn doontaa hal bacaad lagu lisay.
Intiina kor ku xusan ayaa hadal dhameeyey.
dhalin yarado somalidu waa mashaqeestayaal xumaanta ayaa ufudu jaliyadaha hingiska somali ayaa uguyar jelasha waxaa kabuux waa somali daraag ayee gadayaan ayaaga isdilaaya cidkale kuma dhacaan waalid maqlimaayaan kuwa amerka jooga iyo keneda waa lamid ama yurbtakale habeeno waa soojeedin malintiina hurdo nidamkii Ilaahay ayee bedeleen oo aha habeenkii hurdo malinkii macaash aabaha qurba jooga wuxuu inii soo dirin dhaqaan celis aabaha somalia wuxuu soo dirin tahribayaal Sanyaaroow wadananimo ayaa kaamuuqata dilid waxba tarimeeyso intaad celal loo qodo beero ha lagu fasho toban sano markii beer lagu fasho kafaaiiday shartiis ka raysatay asgiin badbaad
Waxaa xaqiiq ah oo aan hubaa, in beelaha koonfureed ee falalka waxshinimada – sida dilalka, bililiqada, xatooyada, boobka, dhaca, iyo argaggixisada – ay caadadoodu tahay oo daalimiintanna ay kadhasheen, ay haddeer qasaas tii uguxumayd uqaadeen guddoomiyaha iyo reer Gaalkacayo iyo guud ahaanba Puntland.
Haddaba, Soomaalidu waatii kumaahmaahday in meesha aad kuqoysato (ama kuqabeysato hadba sida looyaqaan) lagu qallajisto, macnuhuna yahay in hawlaha kooxaha maafiyada ah bulsho lagaga saffeynayo aysan sahlanayn oo colaad dabadheeratana noqoto sida caadiga ah.
Guddoomiyuhu iyo Gaalkacayo hadda ayaa qummaati loo bartilmaansaday oo qolyahaas koonfureed way iskumaqanyihiin oo wayna nagusoomaqanyihiin. Tolka reer Mudug iyo tujaartooda – dal iyo dibedba – iyo Dawladda Puntland waa inay usii tabaabusheytaan sidii colaadda nagusoomaqan la iskaga gaashami lahaa oo isdifaaciddana loojoogteyn lahaa waayo muddo dheer ayay soconaysaa.
Waa in maaliyad aad uculus loogu talagalo oo hub, saanad, qalab, iyo agabba inta ugu casrisan Gaalkacayo iyo magaalooyinka kale ee Puntland lasoodhoobaa. Waana in guddoomiyaha, ehelladiisa, xaafiiskiisa, iyo culimada sida lafaray kudhiirran doonta intaba amnigooda qummaati loosugaa oo 24/7 ciidamo muuqda ay waarddiyeeyaan.
Reer Mudug iyaga ayaa Puntland uugu maalqabeensan oo sidan aan hubana bahda Zambia doollarka iyo kwachaha ay barkanyihiin oo keliya ayaa hawshan kufilan, inta aan qurbajoogtooda kaleba loosii dhaadhicin. War hooy qolyahaasu sidaas kuma aamusna ee lasocda oo fadhiga kakaca!
Madaxweynaha Puntland oo bilaabay Latashiyada la xariira 11 Xubnood ee Aqalka Sare!
Maxaa horyaal kulanka berri ee Barlamaanka Puntland & Guddoomiye Jibriil oo ka hadlay soo laabashada Deni.
XOG: M/weyne Deni oo ku mashquulsan soo gudbinta musharixiinta aqalka sare & xubno laga reebay oo abaabul wada.
DAAWO-Muxuu maanta madaxweynaha Puntland kala kulmay imaanshihiisa Garoowe.
XOG: Xagee ku dambeeyey khilaafkii madaxweynaha Puntland iyo Guddoomiye Jibriil.
Midowga Musharixiinta oo war ka soo saaray tallaabadii uu qaaday Ra’iisul Wasaare Rooble
Madaxweynayaashii hore ee Somalia oo la kulmay odayaasha dhaqanka ee degmada Cadale.
VIDEO: RW Rooble oo seeftiisa galka kala baxay xilkana ka qaaday saraakiishii NISA & hay’adda socdaalka ee amarkiisa jebiyey iyagoo fulinaya amarkii M/weynaha.
XOG: M/weyne Farmajo iyo Fahad Yaasin oo qorshe u degey saaxiibada Axmed Madoobe ee ka sharaxan Gedo.
Madaxweynaha Somaliland oo ku dhawaaqay inuu cafis u fidiyey 279 maxbuus.
DAAWO+XOG: Ardaygii Puntland kasoo jeeday ee lagu dilay Boorama, Xaggee ku dambeysay Dhacdadiisa?
DEG DEG: Shacab lagu afduubay deegaanka Tukaraq & Somaliland oo Laascaanood ku xirxirtay dad taageersan Farmaajo.
Ganacsato reer Puntland oo sheegay in hantidoodii looga dhacay Somaliland ayaa farriin u diray M/weyn Muse Bixi.